Xiaomi Mi MIX 4 waxaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 24 si rasmi ah | Androidsis
Xiaomi Mi MIX 4 waa mid ka mid ah moodooyinka la filayo bilihii ugu dambeeyay ee sanadka. Astaantu waxay xaqiijisay inyar kahor in qaabkani iman lahaa suuqa dayrta. Sidoo kale, waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan toddobaadyo, sida isticmaali doonaa kamaradda 108 MP. Laakiin illaa hadda waxba lagama xaqiijin arrintan sare ee ah nooca Shiinaha.
Ayaa hadda shaaca laga qaaday Muxuu noqon lahaa taariikhda soo bandhigida ee Xiaomi Mi MIX 4. Soo bandhigid sidoo kale la jaanqaadi doonta soo bandhigida MIUI 11, nooca cusub ee lakabka qaabeynta ee nooca Shiinaha. Waxay ahaan laheyd bishan markaan la kulanno.
Marka loo eego macluumaadka cusub ee imanaya, Xiaomi Mi MIX 4 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Sebtember 24. Isla taariikhdaas iyo isla dhacdadaas, MIUI 11, oo ah nooca cusub ee lakabka qaabeynta, ayaa sidoo kale si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa. Xaqiiqdii qaabkani wuxuu horeyba ula imaan lahaa MIUI 11.
Hadday run tahay, in ka yar seddex toddobaad waxaan mar hore ogaan doonnaa dhammaadka sare ee nooca Shiinaha. Intaas waxaa sii dheer, waxaa la qiyaasayaa in dhacdadan ay jiri karaan nooc kale, kaas oo noqon lahaa Xiaomi Mi 9 5G, nooc kale oo ay naga soo gaarayaan warar badan toddobaadyadan waxayna umuuqataa inay dhawaan rasmi noqon doonto sidoo kale.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiro xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan nooca Shiinaha. Laakiin wararka xanta ah ee sheegaya in Xiaomi Mi MIX 4 la soo bandhigi doono Sebtember 24 ayaa sii xoogaysanaysa. Markaa waa taariikh ay tahay inaan xisaabtano, maadaama ay aad u badan tahay in munaasabaddan lagu qaban doono.
Waxaan dheg u noqon doonnaa wararka cusub ee ku saabsan bandhiggan. Balanqaadyo ahaansho dhacdo war ka buuxo soo saaraha Shiinaha, oo shaki la'aan doonaya inuu ballaariyo noocyadiisa kala duwan ee taleefannada qaybo kala duwan. Xiaomi Mi MIX 4 wuxuu noqon doonaa nooc cusub oo heerkiisu sareeyo, kaas oo sanadkan ka dad badan abid taleefannada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi MIX 4 iyo MIUI 11 ayaa la soo bandhigi doonaa isla maalintaas
Kirin 990 wuxuu la imaan doonaa 5G oo lagu dhisay asal ahaan